Maxay ka wada hadleen Qoorqoor iyo Deni oo kulan kii xalay ay yeeshen, xili | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Maxay ka wada hadleen Qoorqoor iyo Deni oo kulan kii xalay ay...
Maxay ka wada hadleen Qoorqoor iyo Deni oo kulan kii xalay ay yeeshen, xili
Madaxweyneyaasha dowlad Goboleedyada Puntland iyo Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa xalay kulan gaar ah ku yeeshay Hotelka Chelsea Village ee ku yaalla xeyndaabka Garoonka Aadan Cadde.
Kulanka oo saacado socday ayaa waxaa looga hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee siyaasadda dalka, xalinta khilaaf ka dhex jiray labada Madaxweyne iyo doorashada ka dhaceysa Soomaaliya oo aan weli heshiis laga gaarin.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay sheegayan in Xildhibaano ka tirsan labada Golle ee Baarlamaanka oo kasoo kala jeeda labada maamul ay isku keeneen Qoorqoor iyo Saciid Deni, sidaasina ay kulanka ku yeesheen.
Sidoo kale Axmed Qoorqoor iyo Saciid Deni ayaa isla gartay in la xaliyo khilaafka ka dhex jiray labada dhinac, isla markaana lasii amba qaado sidii looga wada hadli lahaa caqabadaha ku hor gudban doorashada dhaceysa.
Wararka ayaa intaas waxaa ay kusii darayaan iyo Madaxweyneyaasha ay isku soo hadal qaadeen Shirka Madaxda dowladda Federaalka iyo kuwa maamul Goboleedyada ku dhexmaraya Teendhada Afisyooni ee Muqdisho.
Madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor iyo Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa muddooyinkan soo kala dhex galay khilaaf siyaasadeed, kaddib hadal jeedintii bishii hore ee Madaxweyne Saciid Deni oo uu ka carooday Madaxweyne Qoorqoor.
Maqaal horeQaramada Midoobay oo farriin u dirtay Madaxda DF iyo M/Goboleedyada
Maqaal XigaMidowga Yurub oo Cunaqabateyn saaray 11 Sarkaal oo ku lug lahaa Afgembi